ဘဝမှတ်တိုင်: မိမိသုံးနေတဲ့ Wifi ကို ဖြတ်တောက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် - Wifi Protector v1.4.5 Apk
မိမိသုံးနေတဲ့ Wifi ကို ဖြတ်တောက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် - Wifi Protector v1.4.5 Apk
ကျွန်တော်ဟိုတလောလေးက Wifi တွေကိုဖြတ်တောက်ပေးတဲ့ Wifi Killer လေးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခု လည်း မိမိရထားတဲ့ Wifi လိုင်းတွေကို မဖြတ်တောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Wifi Protector ဆိုတဲ့ Application လေးကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်။ ဗျာ။ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Android OS 2.1 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
- No configuration required, works off the shelf for novices
- Experts can change many settings to adapt the app to their needs
- Undetectable by the bad guy
- 100% silent and passive inside the network. Generates no noise
- Highly customizable notifications
- Plays ringtone on attack (optional)
- Vibrates inagiven pattern on attack (optional)
- Easy to use one-click-interface as well as detailed network view for experts
- "Immunity" protects you without disabling Wi-Fi (root required)
- Can also disable Wi-Fi if you don't have root access to your phone
- Logging of all spoofing attempts with details about the network and the attacker
- Works in complex wireless LANs, like vWLAN and WDS (please see FAQ)
- Detects networks already under attack
- Automatic countermeasures
- Uses very few resources
- Uses no resources if Wi-Fi is disabled
- Nearly zero battery consumption
- Requires very few permissions. Requests only absolutely necessary permissions
For questions, suggestions, feature requests, feel free to visit the forum or send an e-mail to the address below.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/05/2014 12:10:00 am
Honor 4x နှင့် Che-l02 Sleep mode Error လေ့လာသိရှိသလောက် ဖြေရှင်းရန် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် အချို့ဖုန်းတွေမှာ sleep mode ဖြစ်လျှင် wifi blueto...